I Cosmetics | Cosmetics & Wellness | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
I Cosmetics | Cosmetics & Wellness
Ukunyamekelwa kwemvelo ukusuka kwintloko ukuya kuzinyosi
Ubungakanani bemvelo bunokwenziwa ngezithako zemvelo ngendlela yezonyango zemvelo. Ezi zinto aziboneli nje ngeemeko zentlalo-ntle, kodwa aziyiziphumo ezinokusetyenziswa kwezilwanyana. Umnqweno wokuphila kwendalo, ozinzileyo kunye nokusempilweni uyakhula, ngoko ke izimonyo zendalo ziya kuba zikhoyo ngoku kwaye zithandwa.
Uyazi njani izimonyo zemvelo?
Iimpawu zendalo azichazwa ngumthetho kwaye ngoko akukho mqondiso wokulinganisa umgangatho. Kukho ezininzi zamabhalana eziqingqiweyo ezivela kumashishini alahlekisa xa uthenge. Noko ke, ezinye izibonakaliso ezithembekileyo zenziwa ngokuhamba kwesikhathi. Ezi mveliso zivela ekuhlaleni izinto ezibonakalayo ukucwangcisa iimveliso ze-organic. Ngako oko, unako ukuqonda izimonyo zendalo emva kwesitywina.
Kodwa ngelishwa, akukho nje uphawu. Oku kwenza kube nzima. Nangona kunjalo, unokucinga ukuba zonke izinto ezisetyenzisiweyo zivela kwimveliso eneempawu ezivela kwimvelo. Amafutha, ama-wax, ii-oyile, imibala kunye neqhumiso kuphela kunokuveliswa kwi-mineral, imifuno kunye nezinto ezimbalwa ngaphandle kwezinto ezisetyenziswayo kwizilwanyana. I-tabo iiparafini, i-silicones, iimvavanyo zezilwanyana kunye ne-radiac irradiation. Izimbozo zoMgangatho ziquka "NaTrue", "I-Cosmetics yoLawulo lweNdalo" kunye ne "EcoCert".
Ubuhle obuvela kwimvelo buphilile
Kwiziqhelo eziqhelekileyo zizinto ezinomdla ezibangelwa yimiphumo engabangela iziphumo zecala kunye nezifo. Kwimilinganiselo evunyelweyo, ezi zinto zingenakonakala. Kodwa abagxeki bathi umntu akakwazi ukuba izinto ziyakwenza njani nezinye iimveliso ezisetyenzisiweyo. Kwizonyuka zendalo, ezi zinto ziphikisana nazo. Kodwa kunye nezityalo zendalo zineoyile ebaluleke kakhulu ezinokubangela ukuphefumula. Ngoko akukho mntu unokubonisa ukuba izimonyo zendalo okanye izimonyo eziqhelekileyo zilunge.
Imveliso eyahlukeneyo yezonyango zemvelo
Kwizonyuka zendalo, kukho zonke iimveliso ezaziyo kwaye zifuna. Ezi zibandakanya ukunakekelwa ubuso kunye neeliso, ukunakekelwa kweenwele, ukwakheka kunye nokubeka umlomo, ukuhlanjululwa komzimba, isepha, ukhilimu wesandla, ukunakekelwa kwelanga nokunye okuninzi.
Ngokukodwa ulusu lwethu lufuna ukunyamekela nokunyamekela. Ubonakaliswa imihla ngemihla kwiimpembelelo ezingqongileyo zendalo. Ulusu luthatha zonke izinto kwaye lithathele ngaphakathi ngaphakathi emzimbeni. I-Cosmetics iqulethe iikhemikhali ezinokulimaza ulusu. Ngakolunye uhlangothi, inkxaso kunye nokuvuselela isikhumba sethu kwaye senze sibe sihle kwaye sigqibe.
Zizenzele ngobumnandi bemvelo. Eyathandwa kakhulu yizonyango zendalo njengesipho kunye nento ekhethekileyo.
Iintsilelo zezonyango zendalo
Kwibala lezityalo zokuzicoca izityalo uzakufumana phantse i-mascara engapheliyo okanye engaphefumliyo. Nama sunscreen ene-sun protection factor ngaphezu kwe-20 okanye i-lipsticks eqaqambileyo uya kukhangela ngaphandle. Ama-gels kunye ne-shampoos ayenzibuko kunye neenwele zincinci azikwazi ukuhanjiswa ngokukhawuleza. I-silicones kunye nama-powders maxa wambi ziba zibi kakhulu. Nangona iilisi zendalo zinobubi, izinwele ezimnyama azipheli ngokupheleleyo kunye neenwele zikhanyisa kumbala akunakwenzeka.
Abathengi abaninzi bafuna ukunakekelwa kwemvelo baze batyelele kwimveliso yezilwanyana zezilwanyana. Ulusu lwethu luthanda ukunyamekelwa ngenyameko kwaye mhlawumbi luvela kwimithombo yendalo. Okwangoku, ezininzi iinkampani zinika iziselo zezinto zendalo kunye nokuqhubela phambili.
Unonophelo lwendalo kunye neoli yekakhukhunathi
Iimpawu zendalo zesikhumba esihle
Ioli yococonut isisityebi kwaye inika ubuninzi bomswakama. Oku kulungele ukunakekelwa kweenwele. Njengeemeko zeenwele zendalo, inokusetyenziswa kwizinwele xa zityhidiwe. Ukuyikityulela ungayichoboza ngomnye ngezandla zakho. Kungcono ukushiya ioli yekakhukhunta kwizinwele ezimbalwa iiyure. Sekude ixesha lokungena, kulunge umphumo wokunyamekela.
Emva kokubhenca, iinwele kufuneka zihlanjululwe kakuhle ukuze kungabi nantoni. Izinwele ezivakalayo kunye nezingavumelekanga ziya kuba ngumphumo. Ipropati yokunyusa ingasetyenziselwa kuphela iinwele, iyanceda inhlanzi. Ukunakekelwa kweengcambu ze-antibacterial ziyaziwa kwaye ziyaxabiswa. Ioli yekakhukhunathi ingasetyenziselwa umzimba wonke. Ubuso, imilomo, izandla, iinyawo, umzimba wonke uya kuziva unonophelo emva kokunyamekela nokuvumba kakhulu. Amalungu omzimba atyhile ngokukhawuleza athathaka kwaye athathe ithenda kwakhona. Uqoqosho kufuneka lube kunye nokusetyenziswa kweoli kwikhumba elimhlophe.
Ioli yekakhukhunathi yinyameko yendalo ukusuka entloko ukuya enzwaneni. Ingasetyenziselwa umzimba wonke, ngoko ke uyathandwa kakhulu.
Thenga ioli efanelekileyo yekokcoti
Unokuthenga ioli yekakhukhunathi kwiindawo zokutya ezempilo kunye nasezikhungweni zamachiza. Xa uthengwa, kufuneka uqinisekise ukuba akukho nto enezongezo.
Ukunyamekela kwendalo kwesikhumba ngokuqhelekileyo kuqala ngomzimba womzimba. Ukugqithisa umzimba kwizonyango zemvelo kunemveliso ezifana neoli ye-soya, ibhotela ye-shea kunye neoli ye-almond. Ulusu luhlanjululwa yintsimi yomswakama ngexesha elide. Unonophelo olunzulu kunye nokukhuselwa kakhudlwana kwesikhumba kunikezwa ngamavithamini C no-E.
Ukuba ulusu lomelele kakhulu, kungcono ukusebenzisa isilwanyana somzimba.
Ubisi bomelele kunye nomzimba webhotela ibonisiwe. Iqukethe ioli ye-Macadamianus, eyondla ulusu kunye neendawo ezomileyo ngeepidid ezaneleyo. Ngokusebenzisa izinto zeentyatyambo zentshiseko, ukulinganisa kwesikhumba kuvuselelwe kwaye ulusu lukhuselwe.
Ubumba obunqamleko bufuna ukutshatyalaliswa rhoqo. Ukunyamekela kwendalo kusetyenziswa iimveliso kunye neentlobo ezihlukeneyo, ubunzima beeminerali zamanzi olwandle kunye nemifuno ye-glycerine yemimiselo yomswakama.
Ukunyamekelwa kwendalo kuyanda kakhulu. Ingumthombo wolutsha kumzimba kunye nasesikhumbeni.
Iimoniselo zendalo kwi sicelo sabo: Cosmetics & Wellness
Iqhumiso elifanelekileyo | Cosmetics Ubuhle Ubuhle
Iimveliso zendalo - iziqhamo ezenza ube mnandi
Yenza izimonyo zemvelo ngokwakho
Ukupheka kwezilwanyana zezilwanyana zendalo
Susa iinwele zomzimba / iinwele zomzimba ...
Ukuhlamba ekhaya | Wellness
Ukunyamekela amalungu kubantu | Ubuhle beNtlalo